Pistol kunotadzisawo okusungisa Manufacturers uye Suppliers | China Pistol Mupfungwa okusungisa Factory
High voltage kuturika kiramba kunokudziridzwa kutsigira kondakita uye insulators mu panhongonya hutachiwana mitsetse. Kubatanidza simba wire kusvika insulator.
Izvi simba mutsetse Hardware rinoshandiswa AAAC, ACSS, ACSR, vakashonga uye akafukidza mhando hutachiwana conductors.
The anotsigira okusungisa havasi chete kuti mukuru voltage magetsi hutachiwana mitsetse, asi ivo vari kushandiswa ne internet optic netambo (OPGW - Manyiminya pasi waya) uye ADSS (zvose-dielectric kuzvitsigira), kusanganisira preformed pematanda. ruzivo urwu kunoratidzwa internet optic Kuparadzirwa nzvimbo yedu yepaIndaneti.
The kuturika okusungisa kuchengetedza waya kana kugadzwa mitoro, kudzora inofamba nechinzvimbo pamusoro kondakita pamusoro mhepo ine oscillation, vibration, uye kuderedza zvemagetsi kunetseka. Kubudiswa akarongwa mutoro inotongwa axial kubata, izvo zvinogona chaizvoizvo kugadziridzwa kutsungirira kunodiwa simba mukuru voltage zvemagetsi zvemuchadenga waya.
Mukuru voltage gungano kuturika anogona kupiwa pamwe panosangana ziso, danda kukodzera, u-clevis, zvigadziko clevis maererano vatengi racho.
The kuturika kiramba kushandiswa uko guru simba zvinorema zvingaitika. Dambudziko proofed design, uye yakakwirira simba zvinhu yekuzvidzivirira kukuvadza panhongonya simba mutsetse.
High voltage kuturika okusungisa wakaumbwa
* Inopisa Dip kwakakurudzira kufa casted simbi
Hardware - hot Dip kwakakurudzira simbi
High voltage kuturika nenhumbi vakapfuura ngura nemishonga, tembiricha kuchovha uye kukwegura nemiedzo.
Aluminum akakiya Mupfungwa Clamp
Makakatanwa kiramba JR-85
Casted Iron akakiya Type Mupfungwa Clamp